ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : AZA AHODIKODINA NY FAHAMARINA FA HITSANGANA IZAHAY – MyDago.com aime Madagascar
ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : AZA AHODIKODINA NY FAHAMARINA FA HITSANGANA IZAHAY
Nitsangam-bolo, sorena, nalahelo ny tenako hoy ny Me Hanitra Razafimanantsoa androany Sabotsy 11 janoary , raha nandray fitenenana teny amin’ny Magro Behoririka, naheno tamin’ny haino amanjery ny zavatra nitranga tany Mahajanga. Gaga aho hoy izy naheno ny tenin’ilay jeneraly tomponandraikitry ny zandary hoe tsy azo kitikitihana ny mpitandro ny filaminana fa rarafany bala tena izy. Tsy mahagaga raha hoy izy raha izay no nentina hatramin’ny taona 2009, nampiasaina daholo ny basy, herim-pamoretana nandritra ny 2009. Miaina ao anaty faty olona ny fitondrana tetezamita. Efa hiala ao amin’ny fitondrana ny sasany dia izao mamono olona izao. Manameloka ny zavatra nitranga tany Mahajanga isika ary mankahery ireo zanantsika ireo. Ny lalàna hoy Me Hanitra dia milaza mazava fa ny fiadiana dia tsy maintsy mifanahatsahana amin’ny zavatra atao. Ny tany Mahajanga dia mpianatra tsy mitana fitaovam-piadiana nefa norarafana tifitra. Raha any amin’ny fitsarana izany hoy ity mpisolovava mpanao politika ity dia voaheloka ho faty. Rehefa tsy hainao ny lalàna dia miala ianao fa tsy hainao ny mampiasa azy. Efa ela no nangatahantsika ny fialany fa mbola eo ihany izy, ka Andriamanitra tsy andriny , andrintsika ihany.
Ankoatra izay dia nambarany fa misy « playdorie » ao amin’ny Ces. Tsy any amin’ny Ces hoy izy no hanaovako izany fa olona vitsivitsy no maheno azy fa eto. Misy « requette » mba napetratsika any mikasika ny fifidianana filohampirenena sy solombavambahoaka. Misy roa momba ny « disqualification » kanefa nolavin’ny Ces noho ny antony efa fantatsika. Na izany aza hoy izy dia tsy mipetraka isika fa io lalàna io dia azo ahorirana. Isika dia ef aniteny fa misy halatra be vata teto, izany halatra izany no tadiavin’ny sasany iakarana eo amin’ny fitondrana. Fantatsika tsar ahoy ity mpanao politika ity ny zavatr amisy amin’izao fotoana izao. Nisy filazana tany amin’ny haino amanjery omaly fa ireo kandida mahaleontena dia nantsoina teny ambony teny ary terena hiaraka amin’ny MAPAR far aha tsy izany dia resena ao amin’ny Ces. Hay ve hoy ny fanontaniana napetrany ka azo baiko ny Ces? Ny Ces andrandraina hoy izy dia ohatry ny hanahirana. Nanontany ny vahoaka ny Me Hanitra hoe inona no ataontsika raha sanatria manao ny tsy mety ny Ces. Aza ahodikodina ny fahamarinana fa hitsangana izahay ary misokatra ny vavahady ho alehanay.
ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : TSY AFA PO IZAHAY RAHA TSY MODY I DADANAY
1 pensée sur “ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : AZA AHODIKODINA NY FAHAMARINA FA HITSANGANA IZAHAY”
11 janvier 2014 à 19 h 38 min
Tsy misy afatsy io fanaovana confrontation PV sy bulletins de vote io ihany no làlana tokana ahitana ny marina sy izay tena mpandresy.
Rehefa tsy hanao an’io i Kotozafy sy ny CES 2 dia ndao hidina an-dalam-be na ho vonoiny aza isika! I Dokotera + Neny + ny mouvanse ra8 + ny avana + ny vahoaka no miara midina an-dalam-be! Rehefa mitifitra sy misambotra izy dia aleo hanao fa tsy maninona fa isika miady ho @ fahamarinana hatramin’ny farany na hisy inona eto na hisy inona!
Aleo miady @ fahamarinana toa izay velona a.ndevozin’ny olon-dratsy!
Aoka tsy hihemotra intsony ianareo ry neny sy Dokotera ary ireo mpitarika! lasa izao!
Précédent Article précédent : Dr ROBINSON JEAN LOUIS : HO ENY AMIN’NY MAGRO HIARO NY SAFIDY RAHAMPITSO
Suivant Article suivant : RAVATOMANGA ROLAND : AZA MANAO KOLIKOLY IANAREO CES